🥇 Ukwenza ingxelo ngeekhuriya
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 996
Ividiyo ye-accounting yeekhuriya
Uku-odolwa kwengxelo kwiincwadi zeekhuriya
Kwimisebenzi yolawulo lweenkonzo zekhuriya, ulawulo kunye neenkqubo zokunikwa kwengxelo zibaluleke kakhulu, kuba zenziwa ngokunxulumene nabasebenzi beentsimi - abathumeli. Iziphumo kunye nomgangatho weenkonzo ezibonelelweyo zixhomekeke ekusebenzeni kweekhuriya. Ukunqongophala kolawulo oluchanekileyo kuchaphazela inqanaba lokusebenza ngokukuko kunye nesantya sokuhambisa, esiboniswa kwimpendulo engeyiyo evela kubathengi. Ukongeza kulawulo, kufuneka ungalibali malunga nogcino-zincwadi lomsebenzi wabasebenzi basentsimini. Ukuphendula ngezemali ngabathumeli kubonakaliswa ngokugcinwa kwedatha yobalo-mali kwishedyuli yomsebenzi, iiyure zomsebenzi, inani lee-odolo, njl. ukusebenza kwekhuriya nganye. Isenzo sokugqibela somsebenzi wekhuriya kukuhambisa, oko kukuthi, ukugqithiselwa kwempahla okanye izixhobo kumthengi, ingxelo yakhe ichaphazela kakhulu igama lenkonzo yekhuriya. Kwiimeko ezinje, kuyacetyiswa ukuba kugcinwe iirekhodi zabathengi, kwaye kubonelelwe ngekhuriya ngeendlela zokufumana ingxelo.
Ingxelo entle kunye neenkcukacha-manani zabathengi zinokuba nefuthe elibonakalayo ekunyukeni kwenani labathengi, elinokuthi lichaphazele inqanaba lenzuzo kunye nenzuzo yenkampani. Ukugcina iirekhodi zabathumeli kubanzima kwimeko yesiza semisebenzi yabo. Ukuphendula kwabathengi kunokubangela iingxaki ezininzi ngenxa yokuhamba kweodolo enkulu. Okwangoku, intengiso yetekhnoloji entsha kunye neenkqubo zocwangciso-mali zibonelela ngezisombululo ezinokubakho zokwandisa imisebenzi yeenkampani. Iinkqubo zokuzenzekelayo ezijolise ekwandiseni iinkqubo zomsebenzi zenza ukuba kuncitshiswe ukusetyenziswa kwabasebenzi. Ugcino-zincwadi oluzenzekelayo lunezibonelelo ezininzi, kubandakanya nolawulo oluqhubekayo lwemisebenzi yobalo, okuthetha ukuchaneka okuqinisekisiweyo kunye namathuba amancinci okwenza iimpazamo. Ulawulo oluzenzekelayo lwabathumeli luya kukuvumela ukuba uqhube ngokuzenzekelayo zonke iinkqubo, wenze indawo yokuhlala, ubale umvuzo, njl.njl. Le datha inokuthi emva koko isetyenziselwe iinkonzo zokuthengisa ukuze kulawulwe kwaye kuphuculwe umgangatho weenkonzo ezibonelelweyo.
Iinkqubo ezahlukeneyo zobalo-mali zikuvumela ukuba ukhethe eyona nto ifanelekileyo kwinkampani yakho, ithathela ingqalelo zonke iimfuno kunye neminqweno. Kufuneka iqatshelwe ukuba inkqubo ye-automation kufuneka yanelise ngokupheleleyo zonke iimfuno kwaye ibe nayo yonke imisebenzi eyimfuneko yokwandisa imisebenzi yenkampani. Isicelo se-USU-Soft sisoftware ezenzekelayo eyandisa iinkqubo zomsebenzi wayo nayiphi na inkampani, ngaphandle kohlobo kunye nomzi mveliso womsebenzi. I-USU-Soft isetyenziswa ngokubanzi phakathi kweenkampani zothutho kunye neenkonzo zekhuriya. Ukucaciswa kwenkqubo yobalo-mali kuxhomekeke kwinto yokuba uphuhliso lwayo lwenziwa kuthathelwa ingqalelo ubume benkampani, iimfuno zayo kunye nezinto ozikhethayo. Ukuphuhliswa nokuphunyezwa kweSoftware ye-USU yenziwa ngexesha elifutshane kwaye ayifuni ukuba uyeke umsebenzi wakho kwaye ayibandakanyi iindleko ezongezelelweyo kunye notyalo mali.
I-USU-Soft yandisa imisebenzi efana ne-accounting kunye nolawulo, kwaye ikwenze ukuba kugcinwe ulawulo olungaphazanyiswa kwimisebenzi nokuba ikude. Ngokumalunga nokubalwa kwemali yekhuriya, inkqubo ye-USU-Soft ikuvumela ukuba wenze ngokuzenzekelayo imisebenzi efana nokugcina imisebenzi yocwangciso-mali ngokwexesha lomsebenzi kunye nexesha labathumeli, ukulawula abathumeli, ukurekhoda ixesha kunye nesantya sonikezelo olwenziwa yikhuriya nganye, njl. Ngokuphathelele kubalo lwabathengi, iodolo nganye inokudluliselwa ngokuzenzekelayo kwindawo yogcino lwedatha apho ulwazi lomthengi ngamnye luya kugcinwa khona. Ke, unalo lonke ulwazi oluyimfuneko kuphando lwentengiso kunye nokufumana ingxelo kubathengi.
I-USU-Soft lolona tyalo mali lubalaseleyo kwikamva lenkampani yakho! Inonxibelelwano olukhethiweyo kunye noluhlu olubanzi lokukhetha. Unokumisela ulawulo kwimisebenzi yenkampani kunye nabasebenzi, kubandakanya nabasebenzi bentsimi. Ine-timer eyakhelweyo, ke uhlala usazi ixesha elichithwe kunikezelo. Ngesixokelelwano unokwazisa ukuphuculwa komsebenzi wabathumeli kunye nokwenza ingxelo engcono yeodolo, abathengi kunye nezixhobo. Idatha kubaxhasi inokukunceda wenze uphando lwentengiso.
Ukubala okuzenzekelayo, ukubeka esweni isithuthi kunye nokulandela umkhondo, ukhetho oluzenzekelayo lwendlela yekhuriya ziimpawu nje ezimbalwa zesicelo.
Sicebisa ukuba uziqhelanise nobuchule benguqulo yasimahla ngaphambi kokuba ubhatalele inkqubo. Inokukhutshelwa kwiwebhusayithi yethu. Ukuba usenemibuzo, ungasoloko ubuza abameli benkampani yethu ukuba bakubonise intetho ukuze ubone ngokucacileyo ukuba yeyiphi na inkqubo yenkqubo kunye nendlela abalwenza ngayo uphuhliso lombutho wakho. Isicelo se-USU-Soft sidume ngokujonga ngokulula kwaye ngokulula, ngenxa apho ulwazi olunzima oluzenzekelayo luba lula kakhulu kwaye kulula ukulufunda. Abaphathi baya kuthembeka ngakumbi, kwaye baya kuchaphazela zombini iinkonzo kunye namasebe, kunye namasebe, iitheminali, iindawo zokugcina izinto, ezikude ne-ofisi esembindini. Inyani yile yokuba isoftware idibanisa bonke abathathi-nxaxheba kwimisebenzi yenkampani kuthungelwano olunye lolwazi. Ngoncedo lomsebenzi wokwenza ishedyuli, umlawuli uya kuba nakho ukusuka kuhlahlo-lwabiwo mali kwaye ajonge ngokubonakalayo uphuhliso lwexesha elizayo I-Logisticians iya kuba nakho ukucwangcisa iishifti kunye neshedyuli yokusebenza. Nayiphi na ingcali yeli shishini inokujikela kwinkqubo ukuze isasaze ngokufanelekileyo ixesha layo lokusebenza.
Uhlobo lwesibheno *Thenga le nkquboCela intethoUkubuza umbuzoUncedo ngohlobo lwedemo Select configuration *EconomicalStandardProfessional